घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » ग्रेनेडा ब्रेकिंग न्यूज » के लगानीबाट नागरिकता खराब हुँदैछ?
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • ग्रेनेडा ब्रेकिंग न्यूज • साक्षात्कार • निवेश • समाचार • मान्छे • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
ग्रेनेडा नागरिकता बिक्री को लागी
राहदानी र नागरिकता बिक्रीको लागि हो। सस्तो वा यस्तै सस्तो पासपोर्ट बेच्ने देशहरूको सूचीले लगानी अपराध र अधिकका लागि यस संसार खोल्न सक्छ।
सानो पर्यटनमा निर्भर रहेको सानो देशका लागि क्यारेबियन टापु ग्रेनाडा कसरी अनावश्यक ध्यान खिचेको छ कि कसरी सरकारले वर्षौंदेखि उसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आतिथ्य प्रोजेक्टमा वैमनस्यता ल्यायो।
किम्प्टन कावाना बे, लग्जरी कार्यक्रम द्वारा टापुको अद्वितीय नागरिकता मार्फत लगानी गरिएको लक्जरी रिसोर्ट / निवास रोक्नको लागि आयो।
यसका प्रमुख लगानीकर्ता वारेन न्यूफील्ड हुन् जसले मे २०२१ सम्म ग्रेनेडियन राजदूत एट-विशाल र अमेरिकामा तीन देशका कन्सल जनरल मध्ये एकको रूपमा काम गरे।
लगानी मार्फत नागरिकता एक कार्यक्रम हो जुन क्यारेबियनका धेरै देशहरूमा माल्टा, साइप्रस जस्ता देशहरूमा पनि उपलब्ध र प्रमोट गरिएको हो।
नयाँ नागरिकका लागि पुरस्कार ठूलो छ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहुँच पाउनको लागि छुट्टिन्छ।
के ग्रेनाडाले आफ्नो दिमाग परिवर्तन गरे र प्रमुख पर्यटन लगानी जोखिममा छ?
अधिक देशहरूले आफ्नो सीमा र अध्यागमनको लागि मार्गहरू कडा पार्दै, नयाँ उद्योगले ती प्रतिबन्धहरूलाई बाइपास गर्न काम गरिरहेको छ - मोटा शुल्कका लागि। यो उद्योग लगानी द्वारा नागरिकता भनिन्छ।